Degso Flight Simulator 3D APK loogu talagalay Android
Degso Flight Simulator 3D
Degso Flight Simulator 3D,
Hubi inaad si fiican u degto oo aad u degto oo had iyo jeer u timaad garoonka diyaaradaha wakhtigii loogu talagalay. Iyada oo la adeegsanayo Flight Simulator 3D, waxaad fursad u heli kartaa inaad ku duusho daraasiin cabbirro iyo kartiyo kala duwan ah oo aad ka shaqeyso duuliye ahaan shirkadaha ugu waaweyn adduunka.
In Flight Simulator 3D, oo ah jilitaanka duulimaadka, waxaad ku duuli kartaa jihada waddada khariidadda waddada ballaaran ee adduunka ku saleysan, ama waxaad dooran kartaa gaagaaban gaagaaban haddii aad rabto. Ciyaarta dhexdeeda, waxaan asal ahaan ku kasbannaa lacag annaga oo dhammaystirna hawlo kala duwan oo ku jira xaaladaha cimilada kala duwan. Lacagtan waxaan ku furi karnaa diyaarado cusub, waxaan beddeli karnaa muuqaalka diyaaradaheena oo waxaan cusbooneysiin karnaa duulimaadyadayada duulimaadka.
Waxaa ciyaarta ku jira 14 nooc oo diyaarado oo kala duwan, kuwaas oo qancinaya adeegsadayaasha marka loo eego garaafyada iyo tayada codka. Ciyaartaan oo aad marqaati ka noqon doonto xaalado cimilada kala duwan, noocyada hawlgalka ee kala duwan ayaa xamaasad ku dara ciyaarta. Kaalay, soo dejiso ciyaartaan si aad u noqoto duuliye dhab ah oo ka dhig safar diyaaradeed!
Flight Simulator 3D waa ciyaar jilitaan bilaash ah oo loogu talagalay aaladaha Android.
Flight Simulator 3D Noocyada
Horumar: Tap - Free Games